PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - Kumiswe isikhulu se-1KZN TV
Kumiswe isikhulu se-1KZN TV
Siphenywa ngezinsolo ezibucayi
Ilanga - 2018-11-22 - Izindaba - LUCKY CAIN ILANGA, [email protected]
KUXABENE ubendle esiteshini sikamabonakude somphakathi, i-1KZN TV, ngenxa yokushayisana kwemibono nezinkulumo ngokumiswa kukasihlalo webhodi yaso, uMnu Themba Fakazi.
Ngokwesitatimende esithunyelelwe uMnu Fakazi umisiwe esikhundleni ngenxa yezinsolo ezibucayi ezibhekiswe kuyena.
Lesi sitatimende siveze ukuthi isinqumo sokumisa uMnu Fakazi sithathwe yibhodi elibe seliqoka uMnu Chris Mkhize njengebamba likasihlalo.
Ngemuva kwalo mbiko, uMnu Fakazi ufake ukumiswa kwakhe kubameli, ekuphikisa njengoba ekhala ngokuthi akukho emthethweni.
Umthombo waleli phephandaba uthi emhlanganweni wokumisa uMnu Fakazi, amalungu ebhodi abengaphelele, kwazise amanye abetshelwe ukuthi umhlangano uyaqhubeka.
“Kube nesidididi ngoba amanye amalungu athe wona abengazi ngalo mhlangano kanti amanye athi abenalo ulwazi ngawo,” kusho umthombo.
Omunye umthombo uveze ukuthi nguMnu Edwin Mncwango, ongumphathi-siteshi, obetshela amalungu ukuthi umhlangano uyaqhubeka nakuba uMnu Fakazi ebesewuhlehlisile.
Ethintwa uMnu Fakazi, ucele kuthintwe abameli bakhe, kwazise yena akasavumelekile ukuphawula kwabezindaba.
Abameli kuthiwa babhalele uMnu Mkhize incwadi emtshela ukuba lesi siteshi sibuyekeze isinqumo sokumisa uMnu Fakazi zingakapheli izinsuku ezintathu.
Ummeli kaMnu Fakazi, uMnu Xolani Zuma, uthe uma lesi siteshi singayiphenduli incwadi yabo esinikeza izinsuku ezintathu zokubuyekeza isinqumo saso - sokumisa ikilayenti lakhe - ngeke bananaze ukulufaka enkantolo lolu daba.
UMnu Mkhize utshele ILANGA ukuthi bebengakayitholi incwadi eqhamuka kubameli bakaMnu Fakazi, wathi basamile esinqumeni abasithathile njengebhodi. Uvumile ukuthi abengaphelele amalungu ebhodi emhlanganweni abathathe kuwona isinqumo sokumisa uMnu Fakazi.
“Nakuba abengekho wonke, kodwa abesesibalweni esivumelekile ukuthatha lesi sinqumo,” kusho uMnu Mkhize enanela ngokuthi njengebhodi banelungelo lokuthatha izinqumo, inqobo nje uma kunesidingo futhi kulandelwa umthetho.
UMnu Mncwango, obeyingxenye yomhlangano wokuthathwa kwesinqumo sokumisa uMnu Fakazi, uthi benze konke ngokusemthethweni, ngakho basamile esinqumeni sabo.
“Kuningi ebesingakuqondi njengabaphathi besiteshi, ngakho sinqume ukummisa ukuze siphenye kahle ngazo zonke izinto esingaziqondi.
“Uma uphenyo lumkhipha phambili, uzobuyela esikhundleni sakhe kanti uma lumchitha, akukho okunye sizokwenza okufanele.
“Sicela yena avumele uhlelo lophenyo luhambe kahle ukuze kuvele amaqiniso obala,” kusho uMnu Mncwango.
Naye uthi incwadi yabameli bakaMnu Fakazi bebengakayitholi.
UMnu Thulani “Dkt 3 Seconds” Nkwanyana, ongelinye lamalungu ebhodi, uthi okwamanje ngeke akwazi ukuphawula ngoba kuningi angakakuqondi okwenzeka kulesi siteshi.
“Okubalulekile manje wukuthi kuphenywe sonke isiteshi, uma kukhona okungahambi kahle, kuthathwe izinqumo ezifanele.
“Ngifuna ukukubeka kucace ukuthi kalukho uhlangothi engihambisana nalo ngaphandle kobulungiswa,” kusho uMnu Nkwanyana.
ISITHOMBE NGABE: GOOGLE PLUS
KUXABENE ubendle kwi-1KZN njengoba kumiswe usihlalo wayo, uMnu Themba Fakazi.